Fitsaboana hafanana alim-baravarankely 6016 vita amin'ny alim-bary ary orinasa mpamatsy | Ouzhan
6016 alimina alimina fitsaboana hafanana faritra machining CNC
Ny fitsaboana hafanana amin'ny alimina aliminioma dia ny misafidy famaritana fitsaboana hafanana, mifehy ny tahan'ny fanafanana hiakatra amin'ny mari-pana iray mandritra ny fotoana iray ary hampangatsiaka amin'ny hafainganam-pandeha iray hanovana ny firafitry ny firaka.
Fitsaboana hafanana alimo 6016
Ny fitsipiky ny fitsaboana hafanana alimo aluminium
Ny tena tanjona dia ny manatsara ny toetra mekanika an'ny firaka ary manatsara ny fanoherana. Fanatanterahana harafesina, fanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana ary hahazoana fitoniana dimensional.
Fanasokajiana karazana fanodinana firaka aliminioma mety amin'ny fitsaboana hafanana:
Ny alimika aliminioma dia azo ahitsy ho an'ny tanjaka, formability, ary fananana hafa amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mangatsiaka, famonoana olona, ​​fahanterana ary fampidirana annealing. Araka ny fizotran'ny fandidiana toy izany hahazoana ny fananana ilaina dia antsoina hoe médementement io fandidiana io ary ny fanasokajiana ny tempering dia antsoina hoe karazana tempering. Amin'ny ankapobeny, ny akora vita amin'ny aliminioma dia zarazaraina ho sokajy roa: ny karazana fitsaboana tsy hafanana sy ny karazana fitsaboana hafanana: alimo madio (andiany 1000), firaka Al-Mn andiany (3000 andiany), firaka misy andiany Al-Si (andiany 4000) ary Ny firaka Al-Mg Series (andian-dahatsoratra 5000) dia alika tsy mafana; Al-Cu-Mg andian-dahatsoratra (2000 andiany), Al-Mg-Si andian-dahatsoratra andiany (6000 andiany) ary Al-Z n-Mg andian-dahatsoratra Al-Z n-Mg (andiany 7000) dia an'ny firaka voatsabo hafanana.
Ouzhan fampirantiana ampahany amin'ny famokarana alimina aluminium
Inona no vokatry ny fitsaboana hafanana alimina?
Ny firaka aliminioma 6063 dia manana thermoplasticity tsara, fanoherana tsara harafesina ary toetra mekanika tena tsara, ary mora ampidirina electroplated, noho izany dia be mpampiasa amin'ny famokarana mombamomba ny indostria, ny mombamomba ny maritrano ary ny fitaovana elektrika elektrika. Miankina amin'ny tontolon'ny fampiharana ny fitaovana dia misy fahasamihafana lehibe amin'ny takian'ny vokatra. Ohatra, ny vokatra avo lenta ampiasaina amin'ny rafitra fanamafisana ny tobin-kazo elektronika dia mitaky fitakiana avo kokoa amin'ny fanoherana ny harafesin'ny tany amin'ny fitaovana, ary ny mombamomba ny maritrano ampiasaina amin'ny firafitry ny rindrina ambaratonga avo lenta dia somary henjana ny fitakiana plastika sy tanjaka amin'ny fitaovana, izay mahatonga azy io ho zava-dehibe indrindra hampiroboroboana fitaovana vita amin'ny alimina avo lenta. Amin'ny dingam-pikarohana sy fivoaran'ny alika aluminium toy izany, ny fizotran'ny fitsaboana hafanana dia ampiasaina amin'ny toerana maro mba hahazoana rafitra sy fananana tsara kokoa.
Material Firaka aluminium
Fitsaboana ambonin'ny tany Ny fitsaboana simika mahazatra ho an'ny alimo aluminium dia misy chromization, sary hosodoko, electroplating, anodizing, ary electrophoresis. Anisan'izany, ny fitsaboana mekanika dia ny fanaovana sary an-tariby, ny famolahana, ny fasika, ary ny famolahana.
Dingana lehibe ⑴Famenoana ny sehatra fandroahana; Stage Dingana extrusion fanararaotana; ⑶ Dingana extrusion mahery.
Fanaraha-maso kalitao Fanaraha-maso ny kalitao henjana amin'ny dingana rehetra amin'ny fandrindrana ny milina fandrefesana manomboka amin'ny fitaovana ka hatramin'ny fonosana.
Fampiasana Aerospace, fanamboarana sambo, fanamboarana, radiatera, fitaterana, fanodinana fitaovana mekanika, fitaovana ara-pitsaboana ary ny zavatra ilaina isan'andro.
Sary namboarina Manaiky CAD mandeha ho azy, JPEG, PDF, STP, IGS ary ny ankamaroan'ny endrika fisie hafa.
Previous: Fizarana aluminium extrusion profil
Manaraka: Ny radiatera alimina alimina dia mivoaka ampahany